Apple Music waxay soo bandhigtay liis garayn si looga caawiyo dadka qaba cilladaha hadalka | Wararka IPhone
Apple Music waxay soo bandhigeysaa liis ay ku caawineyso dadka qaba cilladaha hadalka
Wadashaqeyntii kaladuwanayd ee udhaxaysay Apple iyo shirkadaha diiwaanka awgood, shirkada fadhigeedu yahay Cupertino waxay soo bandhigtay Saylists, liisaska waxsoosaarka waxsoosaarka ee laga heli karo Apple Music, lana abuuray iyadoo lala kaashanayo Warner Music loonaguna tala galay ka caawi dhalinyarada da'doodu yar tahay hadalka.
Si loo abuuro liis-gale, algorithms ayaa loo adeegsaday taas aqoonso heesaha ku celceliya dhawaaqyada ay adag tahay in loo dhawaaqo kuwa qaba dhibaatooyinka hadalka. Sida laga soo xigtay BBC NewsMid ka mid ah 1kii carruur ah ee ku nool Boqortooyada Midowday ayaa qaba nooc ka mid ah cillada hadalka.
Qaar ka mid ah daaweynta oo ay adeegsadaan dhakhaatiirtu si ay uga caawiyaan dadka dhalinyarada ah ee leh cilladaha noocan ah waxaa ka mid ah ku celcelinta dhawaqa sida "ch," "s," iyo "z." 10-ka liis-warbixineed ee ka mid ah liiska, Waxay kakooban yihiin 173 heesood waxaana kamid ah waxaan kaheleynaa sida wanaagsan ee cadaabta by Lizzo, Right Here, Right Now by Fatboy Slim iyo Ha Bilaabin Hada by Dua Lipa.
Liistada liistada liistada 10 waxaa lagu kala saaraa soo noqnoqodka dhawaaqyada: "Ch", "d", "f", "g", "k", "l", "r", "s", "t" iyo "z". In kasta oo liistadaas ay ku jiraan oo keliya heesaha ku qoran Ingiriisiga, isticmaale kasta oo aan ka mid ahayn macaamiisha adeeggan wuxuu ku heli karaa iyaga oo raadsanaya liiska iyo xulashada xulashada liiska (oo keliya Mareykanka iyo Boqortooyada Ingiriiska).
Khabiirka hadalka hadalka Anna Biavati-Smith, oo iska kaashaday Warnet Music mashruucan, ayaa leh Saylists waa qaab cusub oo hadlaaya oo hadal u ogolaanaya caruurta carbiyaan dhawaaqyada adigoon dareemin cadaadis ama caajis.
Qeyb ahaan, Maamulaha Warner Music, Tony Harlow, wuxuu sheegayaa:
Caawinta dadka inay muujiyaan naftooda ayaa ah udub-dhexaadka waxa aan sameyno, waxaana rajeyneynaa inagoo abuureyno qalab daaweyn oo la heli karo oo la heli karo sida liisaska liiska, waxaan caawin karnaa qof kasta oo dhibaato hadalka qaba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Music » Apple Music waxay soo bandhigeysaa liis ay ku caawineyso dadka qaba cilladaha hadalka
Waxaan tijaabinay HomeKit ku habboon Meross smart biiro
Apple wuxuu sii daayaa watchOS 7.3.3, iOS 14.4.2 iyo iPadOS 14.4.2